1350nm DFB လိပ်ပြာလေဆာရောင်ခြည် Diode ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်းသူများ - Box Optronics
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > Fiber Coupled Lasers > DFB လိပ်ပြာလေဆာရောင်ခြည် > 1350nm DFB လိပ်ပြာလေဆာရောင်ခြည်
1350nm DFB လိပ်ပြာလေဆာရောင်ခြည်
1350nm DFB Butterfly Laser Diode သည် ၁၂၀ မီလီမီတာထုတ်လွှတ်သည့် 900mm fiber fibtail ဖြစ်သည်။ Fiber သည်ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 1M အရှည်ရှိပြီး FC / APC သို့မဟုတ် FC / PC connector များရှိသည်။ အဆိုပါလေဆာရောင်ခြည်ပိုလျှံ, အသစ် -In-box ကိုဖြစ်ပြီး, ဒေတာဇယားနှင့်စမ်းသပ်မှုဒေတာများပါဝင်သည်။
၁၃၅၀nm DFB Butterfly Laser Diode ၏အကျဉ်းချုပ်
1350nm DFB သည် TEC Butterfly Laser Diode တွင်တည်ဆောက်ထားပြီး ၁၂၀ မီလီမီတာထုတ်လွှတ်မှုနှင့်အတူ ၉၀၀μm fiber fiber မှဖြစ်သည်။ Fiber သည်ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 1M အရှည်ရှိပြီး FC / APC သို့မဟုတ် FC / PC connector များရှိသည်။ အဆိုပါလေဆာရောင်ခြည်ပိုလျှံ, အသစ် -In-box ကိုဖြစ်ပြီး, ဒေတာဇယားနှင့်စမ်းသပ်မှုဒေတာများပါဝင်သည်။
1350nm DFB Butterfly Laser Diode ၏နိဒါန်း
1350nm DFB သည် TEC Butterfly Laser Diode တွင်တည်ဆောက်ထားပြီး ၁၂၀ မီလီမီတာထုတ်လွှတ်မှုနှင့်အတူ ၉၀၀μm fiber fiber မှဖြစ်သည်။ Fiber သည်ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 1M အရှည်ရှိပြီး FC / APC သို့မဟုတ် FC / PC connector များရှိသည်။ အဆိုပါလေဆာရောင်ခြည်ပိုလျှံ, အသစ် -In-box ကိုဖြစ်ပြီး, ဒေတာစာရွက်နှင့်စမ်းသပ်မှုဒေတာများပါဝင်သည်။
1350nm DFB Butterfly လေဆာ Diode ၏အင်္ဂါရပ်များ
4. 1350nm DFB လိပ်ပြာလေဆာ Diode ကိုအသုံးပြုခြင်း
1350nm DFB လိပ်ပြာလေဆာ Diode ၏ 5. Electro-Optical ဝိသေသလက္ခဏာများ (T = 25â "ƒ)
> လှိုင်းအလျားစင်တာ အိုင်စီ TL = 15ï½ž35â "ƒ CW 1348 1350 1352 nm
၆။ အထုပ်ပုံနှင့် PIN-OUT အဓိပ္ပာယ် (ယူနစ် - မီလီမီတာ) ၁၃၅၀nm DFB Butterfly Laser Diode ၏အနက်။
၇။ DFB Butterfly Laser Diode ကို 1350nm ပို့ဆောင်ခြင်း၊ သင်္ဘောတင်ခြင်းနှင့်အမှုဆောင်ခြင်း
hot Tags:: 1350nm DFB လိပ်ပြာလေဆာရောင်ခြည် Diode, ထုတ်လုပ်သူများ, ပေးသွင်းသူများ, လက်ကားရောင်းဝယ်ခြင်း, စက်ရုံ, စိတ်ကြိုက်, အမြောက်အများ, တရုတ်, တရုတ်နိုင်ငံ၌ထုတ်လုပ်သည်စျေးပေါ, စျေးနှုန်းနိမ့်, အရည်အသွေး